Trends 8 - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले स्याङजा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नं. ३ का वर्ष ५८ का एक जना पुरुषको निधन भएको बताए । यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २० पुरुष र १ महिला गरी २१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । यससँगै कुल निको हुनेको संख्या ४ सय ८८ पुगेको छ । जसमध्ये ४ सय १९ जना पुरुष र ६९ जना महिला रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । आम आदमी पार्टीले दिएको जानकारी अनुसार हल्का ज्वरो आएको तथा खोकी लागेको हुनाले केजरीवाल ‘ सेल्फ क्वारेन्टाइन’ बसेका हुन् । मंगलबार उनको कोरोना परीक्षण गरिने बताइएको छ । केजरीवालले आफ्ना सबै मिटिंग रद्द गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री केजरीवाल आइतबार दिउँसोदेखि अस्वस्थ्य छन् । यसपछि उनले कसैसँग पनि भेट गरेका छैनन् । ५१ वर्षीय केजरीवाल दिल्ली स्थित आफ्नो सरकारी निवासमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
केजरीवालको स्वास्थ बारे आप पार्टीका विधायक जरनैल सिंहले ट्वििट गरेका छन् । ‘हाम्रा प्रिय अरविन्द केजरीवाललाइ हिजोदेखि हल्का ज्वरो तथा खोकी लागेको छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनलाइ क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । भोलि उनको कोविड–१९जाँच गराइनेछ’,सिंहले ट्वििटमा भनेका छन् ।
आइतबार मुख्यमन्त्रीले डिजिटल प्रेस कन्फरेन्स गर्दै दिल्लीबासीहरुका लागि अस्पतालमा बेड आरक्षणको नीति घोषणा गरेका थिए । प्रेस कन्फरेन्स अवधिभर उनले मास्क लगाइनैरहेका थिए । कोरोना भाइरस बिरामी तथा शंकास्पदहरुकालागि अस्पतालमा बेड उपलब्ध नभइरहेको गुनासो बढन लागेपछि केजरीवालले दिल्ली सरकारद्धारा संचालित अस्पताल तथा केहि नीजि अस्पतालमा राजधानीवासीहरुको मात्र स्वास्थ्य जाँच गरिने नीति घोषणा गरेका थिए ।
उनले दिल्लीका अस्पतालहरुमा अन्य राज्यबाट पनि बिरामीहरुको संख्या बढने भन्दै बन्द गरिएको दिल्लीको सीमा पून खोल्ने जानकारी गरेका थिए । दिल्ली पछिल्लो केहि दिनदेखि कोरोना भाइरसको दैनिक एक हजार भन्दा बढि संक्रमित देखिन थालेको छ । राजधानीमा कोरोना संक्रमितको संख्या २७ हजार नाघिसकेको छ ।
भारतमा सबै भन्दा बढी कोरोना संक्रमित राज्यमा दिल्ली तेश्रो स्थानमा रहेको छ । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याँक अनुसार दिल्लीमा २८९३६ संक्रमित पुगेका छन् भने ८१२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनालाइ जितेर १ सय २ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये १ सय जना पुरुष र २ जना महिला रहेका छन् । यससँगै कुल निको हुनेको संख्या ४ सय ६७ पुगेको छ । जसमध्ये ३ सय ९९ जना पुरुष र ६८ जना महिला रहेका छन् ।
अहिले सम्म निको भई घर फर्किनेहरुमा प्रदेश १ मा ९१ जना, प्रदेश २ मा १ सय ८६ जना, बागमती प्रदेशमा ३२ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३ जना, प्रदेश ५ मा १ सय ३३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ९ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ जना रहेका छन् ।
प्रवक्ता डा विकास देवकोटाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनालाइ जितेर १ सय २ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये १ सय जना देवकोटाका अनुसार देशभर २ हजार ९ सय ६८ जना संक्रमितहरु अइसोलेसनमा रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश १ मा १ सय ६८ जना, प्रदेश २ मा ९ सय ७४ जना, बागमती प्रदेशमा ५७ जना, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८ जना, प्रदेश ५ मा ९ सय ४४ जना, कर्णाली प्रदेशमा ६ सय २१ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६ जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय १३ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङ्मा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा थप २ सय १३ जनामा संक्रमण भेटिएको बताए । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ३४ सय ४८ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमण हुनेहरु मध्ये २ सय ९ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन् । यस्तै हालसम्म भएका कुल संक्रमित मध्ये ३ हजार २ सय १२ जना पुरुष र २ सय ३६ जना महिला रहेका छन् ।
दैलेख, जुन ७
दैलेखमा कोरोना संक्रमणको दर एक्कासि बढेपछि कर्णालीकै कोरोना उत्पादन केन्द्र बन्ने सम्भावना भएको भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग तत्काल संक्रमण रोकथामको पहल चाल्न दैलेखका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यलयले नारायण नगरपालिका र दुल्लु नगरपालिकालाई निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । भारतबाट भित्रिएका नागरिकमा कोरोना पुष्टि भइरहेको छ तर संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उपचारमा ध्यान नदिँदा कोराना समुदायस्तरसम्म फैलिनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
नगरभित्रका ११३ मा एकैपटक संक्रमण भएपछि सुरक्षा चिन्ता बढेको हो । शुनिबार दुल्लु नगरपालिकामा २६ र महाबु गाउँपालिकामा पाँचमहिने बालिका तथा अठारमहिने बालकसहित १०७ सङ्क्रमित देखिएपछि अहिले दैलेखमा कूल संख्या ३५२ रहेको छ । एकको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भइसकेको छ भने एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । पछिल्लो बिहीबार संक्रमण देखिएका ११३ मध्ये ८७ जना गाउँमै छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर आइसोलेसन अस्पतालमा ल्याउने छलफल चलिरहेको छ ।
भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकामा एकाएक संक्रमणको जोखिम बढेको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिले नारायण नगरपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसेकालाई एक साता कटेपछि पिसीआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरेर सुर्खेत पठाएको थियो । नतिजा आउन ढिलाइ भएपछि उक्त स्वाब जुम्ला गयो । जुम्लाबाट धेरैको शंकास्पद छ भनियो तर पुष्टि गरिएन ।
रिपोर्ट आउन ढिला भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर तिनै क्वारेन्टिनमा बसेकाको पुनः आरडिटी गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएका जतिलाई घर पठायो । घर पुगेको तीन दिन के बितेको थियो, नगरभित्रका ११३ मा संक्रमण पोजेटिभ भनेर रिपोर्ट आयो । तर क–कसको नाम हो भनेर बिहीबार साँझसम्म आएन ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले आपतकालीन बैठक राख्यो तर संक्रमित अधिकांश घर पुगेका थिए । बुधबारदेखि उनीहरू घरमै छन् । अहिले दैलेखको नारायण नगरपालिकाका विभिन्न वडामा ८७ संक्रमित घरमै बसेका छन् । समस्या केही नभएका कारण उनीहरुलाई घरमै सुरक्षित राख्नेतर्फ जिल्ला सुरक्षा समिति र स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख लागेको छ ।
स्थानीय राजनीतिक दलले संक्रमित मार्फत अन्य वृद्ध र बालबालिकामा संक्रमण फैलिने र दैलेखको अवस्था भयावह हुने भन्दै तत्काल जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका सबै सिल गर्नुपर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले यस्तो महामारी रोगलाई पनि सामान्यरूपमा हेरिनुले जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
उनका अनुसार यस्तो बेलामा जिम्मेवार निकायले हेलचेक्र्याइँ गर्ने हो भने अवस्था जटिल बन्नसक्छ । केन्द्र वा प्रदेश सरकारले तत्काल दैलेखका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने समन्वय प्रमुख थापाले बताए । “भारतबाट ४२ हजार आउने अनुमान छ । अहिले १२ हजार आइसकेका छन् । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दैलेखमा धेरैमा संक्रमण देखिन सक्ने जोखिम बढेको छ । हामीले बारम्बार सरकारलाई यो कुरा जानकारी गराएका छौँ ।” अवस्था भयावह भएको सुन्नुभन्दा सरकारले अहिलेनै विशेषरूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले कुन वडामा कति जना संक्रमित पुगेका हुन्, क–कसलाई भेटे भन्नेबारेमा वडाध्यक्षलगायतलाई सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । पिसीआर परीक्षणमा भएको ढिलाइकै कारण विभिन्न वडा र घरसम्म कोरोना संक्रमण पुगिसकेको छ । तत्काल रोकथामको उपाय अपनाउन नसके दैलेख कोरोनाको ‘इपिसेन्टर’ बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताइन्छ ।
सदरमुकामको नारायण नगरपालिकामा मात्रै १९५ मा सङ्क्रमण देखिएपछि संकटकाल घोषणा गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले पहिला नै माग गरेका थिए । जिल्ला सुरक्षा समिति र जनप्रतिनिधिको विवादका कारण सदरमुकाममा कफ्र्यु घोषणा गरिएन, न त संक्रमितको खोजी नै गरियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा निरञ्जन पन्तले संक्रमितलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिएको अवस्थामा घरमै सुरक्षित बस्न र फोनबाट स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूको अवस्था बुझ्ने काम भएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यस्तै निर्देशिका जारी गरेर पठाएकाले यो विषयमा जिल्लामा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकाले तत्काल स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा लाग्न महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जङ्गबहादुुर शाहीले बताए । क्वारेन्टिन बनाउने ठाउँ सकिइसके भन्दै उनले नागरिक धेरै हुँदा एकै ठाउँ संक्रमित उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्दै गएको बताए ।
नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको लापरवाहीका कारण दैलेख कोरोना ‘सेन्टर’ बन्न पुगेको बताए । “स्थानीय सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै हो, तर हाम्रा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थानुसार कतिपय स्थानमा कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने भयो । अहिले संकट उत्पन्न भएको छ”, उनले भने । उनले महामारीको यो समयमा सबैले एकढिक्का भएर सङ्क्रमण फैलिन नदिने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले तत्काल सोच्नुपर्ने सुझाव दिए ।––रासस
Previous 1 …5678910 11 … 114 Next